China Yakaonda Polyimide bendable FPC ine FR4 yekuomesa vagadziri uye vanotengesa | Kangna
Chinyorwa mhando: polyimide
Min mugomba saizi: 0.20mm
Finished bhodhi ukobvu: 0.30mm
Lead nguva: mazuva gumi
1. Chii chinonzi FPC?
FPC ndiko kupfupikiswa kweyakagadziriswa akadhindwa wedunhu chiedza chayo, hutete hwakakora, kusununguka kukombama uye kupeta uye humwe hunhu hwakanaka hunofadza.
FPC inogadzirwa neUnited States panguva yenzvimbo yedombo rocket tekinoroji yekuvandudza.
FPC ine yakatetepa inodzivirira polymer firimu ine inoitisa matunhu mapatani akaiswa ipapo uye anowanzo kupihwa neyakaonda polymer kupfeka kudzivirira iwo maconductor macircuit. Iyo tekinoroji yanga ichishandiswa yekubatanidza zvigadzirwa zvemagetsi kubvira ma1950 mune imwe nzira kana imwe. Ikozvino ndiyo imwe yeakanyanya kubatana matekinoroji ari kushandiswa mukugadzira mazhinji ezvemazuva ano zvigadzirwa zvemagetsi zvemhando yepamusoro.
1. Inogona kukombama, kukuvadzwa uye kupetwa zvakasununguka, zvakarongedzwa zvinoenderana nezvinodiwa pakurongeka kwenzvimbo, uye ndokufambiswa uye kuwedzereredzwa zvisina tsarukano munzvimbo-mativi matatu, kuti uwane kusangana kwemusangano wechinhu uye kubatana kwetambo;
2. Iko kushandiswa kweFPC kunogona kudzora zvakanyanya vhoriyamu uye huremu hwezvigadzirwa zvemagetsi, zvinoenderana nekuvandudzwa kwemagetsi zvigadzirwa kune yakakwira density, miniaturization, yakanyanya kuvimbika.
FPC redunhu bhodhi zvakare ine zvakanakira yakanaka kupisa kupisa uye weldability, nyore kuisa uye yakaderera yakazara mutengo. Iko kusanganiswa kweanoshanduka uye akaomarara bhodhi dhizaini zvakare inogadzirira kushomeka kushoma kweanoshanduka substrate mune inotakura kugona kwezvinhu kune imwe nhanho.
FPC ichaenderera nekuvandudza kubva kumativi mana mune ramangwana, kunyanya mu:
1. Ukobvu. Iyo FPC inofanirwa kuve inoshanduka uye kuonda;
2. Kupeta kuramba. Kupfugama chinhu chinowanikwa cheFPC. Mune ramangwana, FPC inofanirwa kuve inochinjika, kanopfuura zviuru gumi. Ehezve, izvi zvinoda nani substrate.
3. Mutengo. Parizvino, mutengo weFPC wakakwira zvakanyanya kupfuura IYO yePBB. Kana mutengo weFPC ukadzika, iwo musika unenge wakafara zvakanyanya.
4. Tekinoroji chikamu. Kuti uwane zvinodikanwa zvakasiyana siyana, maitiro eFPC anofanirwa kukwidziridzwa uye iyo shoma yekuvhura uye mutsara upamhi / mutsetse wepakati unofanirwa kusangana nezvinodiwa zvakanyanya.
Pashure: 8.0W / mk yakakwira yekupisa conduction MCPCB yeMagetsi torch
Zvadaro: 6 dura impedance kudzora yakaoma-flex board ine stiffener